MM Popular – Page6– News And Videos
“ခွန်းဆင့်နေခြည်ကိုချစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့သူထူးစံ” သူထူးစံကတော့ဝန်ခံလိုက်ပြီနော် … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားခြော တဈယောကျဖွဈတဲ့ သူထူးစံကတော့ သူရဲ့ထူးခွားတဲ့ အနုပညာစှမျးရညျ တှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ ကွှနေရေတဲ့ သူတဈယောကျ ပဲဖွဈပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား …
” မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ အလှတွေနဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ” အံ့သြသွားတယ်မလား ?? ( အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ။ )
အနုပညာသကျတမျးတလြှောကျမှာ ကောငျးသတငျးမြားနဲ့သာ နာမညျကွီးလာတဲ့ ဝါရငျ့မငျးသမီးခြောလေး ခိုငျနှငျးဝကေိုတော့ ဒီနမှေ့ာ အပွောငျးအလဲမြားစှာနဲ့ မွငျတှလေို့ကျရပါတယျ။ ခါတိုငျးသာမနျမွငျနကေပြုံစံမြားနဲ့ ကှဲထှကျကာ အံ့သွလောကျအောငျလှနတေဲ့ ဆယျ ကြျောသကျလေးကောငျမလေးတဈယောကျကို လှလှနျးနတေယျဆိုတာတော့ ဒီပုံ ကလေးတှမွေငျရငျ ပရိသတျကွီးလကျခံမိမှာ အသအေခြာပါပဲ ။ 1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ …
“ပိုက်ဆံလေးနှစ်ထောင်သုံးထောင်နဲ့ စိတ်ကူးယာဉ်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရေးခဲ့ရတဲ့ရွှေထူး” ကြောက်လို့အိပ်ရာထဲမှာပဲခွေနေရတဲ့ထိ……….
ပရိတျသတျကွီးရေ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲကောငျလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ တေးသံရှငျရှထေူးကိုတော့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျလို့ထငျပါတယျ။သူထှကျရှိထားတဲ့ စိတျကူးယဉျစာအုပျဆိုတဲ့ အခှေးလေးကလဲ ပရိတျသတျတှကွေိတျကွိတျတိုးအားပေးခဲ့တဲ့အခှလေေးပဲဖွဈပါတယျ။ထိုအခှလေေးနဲ့ ပတျသတျပွီးကွိုးစားခဲ့ရတဲ့ ရှထေူးရဲ့အကွောငျးလေးကိုလဲ ပရိတျသတျတှအေတှကျ တငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် ဗွီဒီယိုဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားလိမ့်မယ်………ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ထွန်းထွန်းက လေးငါးချက်လောက် စမ်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆက်ဆောင့်တော့သည်….”အား အ အ အင်း “စနိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အော်ညည်းကာခံသည်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. ဘုရား ဘုရား အမျိုးသားများအား …
တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်း သံယောဇဉ်မပြတ်သေးတဲ့သူတို့ နှစ်ယောက်….
လငျနှငျ့မယားဆိုတာ တကယျတော့ နားလညျမှု အတျောကို ပေးရတာပါ။ ကတောကျကစ မဖွဈဘူးတဲ့ အိမျထောငျရေးမရှိသလို အမွဲတမျး စိတျခမျြးသာနရေတဲ့ အိမျထောငျရေးလညျးမရှိပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ သညျးခံပွီးပေါငျးကွရတာပါဘဲ။ သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေို ၉ လပိုငျး လကုနျကတညျးက သူမယောကျြားနှငျ့ တရားဝငျကှာရှငျးပွတျဆဲပွီးပွီ ဟု အသိပေးလိုကျတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးနှငျ့ ဥက်ကာမွငျ့ကွူတို့ကတော့ ဒီသကျသတှေကွေညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျသံယောဇဉျမပွတျသေးတာကိုတှရေ့ပါတယျ…. ဘုရား ဘုရား လုလုအောင် ငယ်ငယ်တုန်းက အ၀တ်လုံးဝမပါတဲ့ ပုံ ကြည့်ချင်သူများ စာကြောင်းလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ….. မယုံရင် နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်။ ဘုရား ဘုရား ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား နဲ့ သဇင်အောကားတဲ့… လုံးဝထင်မထားဘူး။မယုံရင် …
“ဘာသာအားလုံး ဖြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်” ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ စာမေးပွဲပြီးသွားပြီ ဖြစ်လို့ ပျော်နေပါတယ်.. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ့်ပါ…)
ပရိသတျအခဈြတျော သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး စိုးပွညျ့သဇငျကတော့ စာမေးပှဲပွီးသှားပွီ ဖွဈလို့ ပြျောနပေါတယျ..။ စိုးပွညျ့သဇငျဟာ အဝေးသငျ တတိယနှဈ မွနျမာစာ စာမေးပှဲကို ဖွဆေိုနတောဖွဈပွီး ယနေ့ နိုငျဝငျဘာ(၂၉)ရကျနမှေ့ာ စားမေးပှဲပွီးသှားလို့ ပြျောနတော ဖွဈပါတယျ..။ 1 OMG ရုံးခန်းထဲမှ ပေါ်တင်ကြမ်းနေကြတဲ့စုံတွဲ…သူဋေးကလဲဘာမှမပြောဘူး ဒီအတိုင်းကြည့်နေတာ…တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးအပြတ်ဆွဲနေကြတယ် အကွက်ဆန်းလေးတွေနဲ့……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မြန်​မာ ရှယ်​ကြမ်း ​ချောင်းရိုက်​…အားနာတယ်..နာတယ်….ကိုကြီးနာတယ်…ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးခါနီးပြီ…အားး…အားး…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အေးမြတ်သူနဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့ ဘဲကြီးနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကြမ်းနေကြတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူးဗျာ….ဒီလောက်လုပ်နိုင်မှန်း လုံးဝမထင်ထားဘူး……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ရွာထဲကအသက်ကြီးကြီး ဘိုးတော်က အပျိူကြီးမမကို အတင်းဝင်လုံးပြီး …
” တရားစွဲဆိုပါမယ် ဆိုတဲ့ မင်းသမီး ရွှေပိုးအိမ်” မင်းသမီး ရွှေပိုးအိမ်ဟာ မဟုတ်မမှန်ရေးသားပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး……… အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
နာမညျကွီး အဆိုတျော ခမျြးခမျြးနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဘုဏျးသိုကျတို့ရဲ့ လမျးခှဲပွတျဆဲမှုဟာ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ပရိသတျစိတျဝငျစားမှု မွငျ့တကျလို့နပေါတယျ။ မနကေ့ နိုဝငျဘာ (၂၄) ရကျနေ့ သတငျးစာမှ အဆိုတျော ခမျြးခမျြးဘကျမှ ကှာရှငျးပွတျဆဲကွောငျးကို အတိအလငျးကွညောခဲ့ပွီး ဖျောပွပါ အခကျြအလကျတှထေဲမှာ သူတို့နှဈဦးဟာ ဇူလိုငျလ (၁၇) တညျးက မိဘတှရှေမှေ့ာ ကှာရှငျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ 1 OMG ရုံးခန်းထဲမှ ပေါ်တင်ကြမ်းနေကြတဲ့စုံတွဲ…သူဋေးကလဲဘာမှမပြောဘူး ဒီအတိုင်းကြည့်နေတာ…တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးအပြတ်ဆွဲနေကြတယ် အကွက်ဆန်းလေးတွေနဲ့……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မြန်​မာ ရှယ်​ကြမ်း ​ချောင်းရိုက်​…အားနာတယ်..နာတယ်….ကိုကြီးနာတယ်…ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးခါနီးပြီ…အားး…အားး…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အေးမြတ်သူနဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့ ဘဲကြီးနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကြမ်းနေကြတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူးဗျာ….ဒီလောက်လုပ်နိုင်မှန်း …
“ကောင်လေးတွေကို ဂယက်ထသွားစေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ Live ဗီဒီယို” ခေး ယွန်းဝတီ စကားပြောနေပုံလေးက ကြွေလောက်တယ်.. သူမရဲ့ Live ဗီဒီယိုကို အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ-
ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ ပရိသတျဝနျးရံမှုအမြားဆုံးရထားတဲ့ ဆယျလီတှအေနကျ နိုငျငံကြျောမငျးသားလှငျမိုးရဲ့ သမီးဖွဈသူ ယှနျးဝတီလှငျမိုးတဈယောကျလညျး အပါအဝငျပါပဲ။ အမာခံပရိသတျတှအေရမျးမြားတဲ့ သရုပျဆောငျယှနျးဝတီလှငျမိုးဟာ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ အနုပညာဗီဇ ပါလာသူဖွဈပမေယျ့ သွစီမှာ ကြောငျးတကျနပွေီး ပညာရေးဘကျကိုဦးစားပေးနသေူဖွဈပါတယျ။ 1 OMG ရုံးခန်းထဲမှ ပေါ်တင်ကြမ်းနေကြတဲ့စုံတွဲ…သူဋေးကလဲဘာမှမပြောဘူး ဒီအတိုင်းကြည့်နေတာ…တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးအပြတ်ဆွဲနေကြတယ် အကွက်ဆန်းလေးတွေနဲ့……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မြန်​မာ ရှယ်​ကြမ်း ​ချောင်းရိုက်​…အားနာတယ်..နာတယ်….ကိုကြီးနာတယ်…ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးခါနီးပြီ…အားး…အားး…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အေးမြတ်သူနဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့ ဘဲကြီးနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကြမ်းနေကြတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူးဗျာ….ဒီလောက်လုပ်နိုင်မှန်း လုံးဝမထင်ထားဘူး……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ရွာထဲကအသက်ကြီးကြီး ဘိုးတော်က အပျိူကြီးမမကို အတင်းဝင်လုံးပြီး နို့စို့ကာ …
” ဆိုးဆိုးရွားရွား ကားတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်း ” . ကားတွေကြေမွနေတဲ့အပြင် မီးတွေပါ ထလောင်တာတဲ့ နေမင်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြထားတဲ့ Video File ကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ပါဦ … ( ရုပ်သံကြည့်ရန် နှင့် အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ )
သရုပျဆောငျနမေငျးကတော့ နိုဝငျဘာ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ကား accident တဈခုဖွဈခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ ။ သူ့ကားက တိုကျတာမဟုတျဘဲ သူ့ကားကို ၀ငျတိုကျတာလို့ သူကဆိုပါတယျ ။ 1 OMG ရုံးခန်းထဲမှ ပေါ်တင်ကြမ်းနေကြတဲ့စုံတွဲ…သူဋေးကလဲဘာမှမပြောဘူး ဒီအတိုင်းကြည့်နေတာ…တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးအပြတ်ဆွဲနေကြတယ် အကွက်ဆန်းလေးတွေနဲ့……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မြန်​မာ ရှယ်​ကြမ်း ​ချောင်းရိုက်​…အားနာတယ်..နာတယ်….ကိုကြီးနာတယ်…ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးခါနီးပြီ…အားး…အားး…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အေးမြတ်သူနဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့ ဘဲကြီးနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကြမ်းနေကြတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူးဗျာ….ဒီလောက်လုပ်နိုင်မှန်း လုံးဝမထင်ထားဘူး……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ရွာထဲကအသက်ကြီးကြီး ဘိုးတော်က အပျိူကြီးမမကို အတင်းဝင်လုံးပြီး …
” အွန်လိုင်းမှာပျံနှံလာတဲ့ ထွန်းထွန်းနဲ့ သူ့ချစ်သူရဲ့ ပုံတွေ ” . ထွန်းထွန်းမပြောပေမယ့် ဘယ်သူဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်နေခဲ့ကြပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံတွေဟာလည်း … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ထှနျးထှနျးကတော့ သူ့ဖုနျး Screen ပျေါမှာခဈြသူရဲ့ ပုံလေးကိုတငျထားတာကို ပရိတျသတျတှေ သိရှိသှားကွပါတယျ ။ ဖွဈပုံကတော့ 11:11 လိုမြိုး ဂဏနျးတူအပူးတှကေို အခြိနျအဖွဈ လြှပျတပွကျမွငျလိုကျရရငျ ခဈြသူက ကိုယျ့ကိုသတိရနတေယျလို့ ဆိုကွတဲ့အတှကျ ထှနျးထှနျးက ဖုနျးပျေါကနေ သူမွငျလိုကျတဲ့ ဂဏနျးအပူးတှကေို screenshot ဖမျးပွီး 1 OMG ရုံးခန်းထဲမှ ပေါ်တင်ကြမ်းနေကြတဲ့စုံတွဲ…သူဋေးကလဲဘာမှမပြောဘူး ဒီအတိုင်းကြည့်နေတာ…တစ်မျိူးပြီးတစ်မျိူးအပြတ်ဆွဲနေကြတယ် အကွက်ဆန်းလေးတွေနဲ့……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ မြန်​မာ ရှယ်​ကြမ်း ​ချောင်းရိုက်​…အားနာတယ်..နာတယ်….ကိုကြီးနာတယ်…ဆောင့်ဆောင့် မြန်မြန်လေးဆောင့်ပြီးခါနီးပြီ…အားး…အားး…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အေးမြတ်သူနဲ့စပွန်ဆာပေးတဲ့ ဘဲကြီးနဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ ကြမ်းနေကြတာ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူးဗျာ….ဒီလောက်လုပ်နိုင်မှန်း လုံးဝမထင်ထားဘူး……..ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို …
” သမီးလေးကြောင့် တစ်အိမ်သားလုံး လွမ်းကျန်ရစ်ခဲ့ရတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်တို့မိသားစု” ဘယ်လိုပဲသတိကပ်ကပ် အသိကလွတ်လွတ်သွား နေရထိုင်ရမသက်သာပါလား ” ….ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လင်းဇာနည်ဇော်က အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ –
တဈခြိနျက ရုပျရှငျလောကမှာ အကယျဒမီဆုဆှတျခူးထားတဲ့ ၀ါရငျ့သရုပျဆောငျ လငျးဇာနညျဇျောကတော့ Single Mother တဈယောကျအဖွဈ သမီးလေးကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးနသေူဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှနေညျးသှားပမေယျ့လညျး လူမှုကှနျရကျမှာ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျလေးတှကေို အမွဲမပွတျမြှဝပေေးနတောမို့ ပရိသတျအားပေးမှုတှေ ဒီနထေိ့ ရရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား ဂျပန် ဟို..ကားတွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ ဘာလို့များ အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ အော်ငြီးကြတာလဲဆိုတာ အခုမှ သိတော့တယ်….. ၁၈ပြည့်မှဝင်ကြည့်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား လူပုညီကအကိုနှစ်ယောက်က လူပုမလေးကိုဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်တဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ 18နှစ်ပြည့်ပြီးမှ ကြည့်ပါ…..အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။. Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား …